Bazonxusa izithandwa zabo ziyeke ukuqonywa ohlelweni lweTV
UNOLUTHANDO Mbeje ozokwethula uhlelo oluthi Face to Face kuMzansi Magic nokuwuhlelo oluzosiza abantu besilisa nabesifazane abafuna ukukhuluma nezithandwa zabo eziqonywayo. Isithombe: SITHUNYELWE
UMLINGISI wakuleli uNoluthando Meje, uthi usekubheke ngabomvu ukusiza abantu abanenkinga ngezithandwa zabo eziqonywayo, ohlelweni oluzovula abantu bakuleli amehlo uma kuza kulolu daba, athe lwenzeka emindenini eminingi kuleli.
UNoluthando uke wabonakala elingisa emdlalweni waku-SABC3 osewaphela Isidingo, Home Affairs nakwiStokvel.
Lokhu uzokwenza ohlelweni olusha oluthi Face to Face, oluzoqala ngoLwesibili kuMzansi Magic (161), ngo-8.00, ebusuku.
UNoluthando uzohlangana nomuntu ofuna ukuhlalisa phansi isithandwa sakhe asibuze ukuthi kungani singathembekile othandweni lwabo noma emshadweni wabo.
Uthe ngalolu hlelo abafuni ukubathela ngehlazo abantu abazobonakala kulona kodwa ingoba bafuna ukusiza, abantu abanezinhliziyo ezibuhlungu.
“Yini ongayenza uma isithandwa sakho esiqonywayo, singazishintshi izindlela zaso yize usukhulume naso kaningi? kulolu hlelo-ke sizozama okokugcina njengoba sizosiza owesilisa noma owesifazane othi usekhulume kakhulu nesithandwa sakhe kodwa asishintshi, sizobheka ukuthi yini le emenza angaguquki ezindleleni zakhe, njengoba sizofaka nesandla songoti kwezithinta ezothando,” kusho uNoluthando.
Uthe ngeke akufihle ukuthi lolu hlelo kube ngolubuhlungu kakhulu ngesikhathi beluqopha, noluvuse izilonda kwabaningi ababe yingxenye yalo.
“Ukungathembeki othandweni ngenye yezinto ezenzeka kakhulu kuleli. Ohlelweni kufika abantu abanezinhliziyo ezibuhlungu kodwa ngokubambisana noVuyo Temba siyathemba ukuthi ababukeli bazowamukela umsebenzi esiwenze ngokuzinikela, ukuze sithole isixazululo. Sifuna ukwazi kahle ukuthi yini edala ukuthi oyedwa angathembeki othandweni,” kuchaza yena.
Ukugcizelele ukuthi lolu uhlelo olungeke lube nodlame, futhi abantu bazohlangana endaweni eyimfihlo nekulungele ukuthi kuxoxwe kuyo ngokuthula.